रजस्वला हुदा महिला माथि गरिने समाजको व्यवहार | Butwal Dainik
रजस्वला हुदा महिला माथि गरिने समाजको व्यवहार
रजस्वला भनेको महिलाको पाठेघर भित्र जम्मा भएको फोहोर रगतको डिक्का फुटेर रगत बाहिर आउनु हो । नेपाली समाजमा रजस्वलालाई पापको दृष्टि कोणले हेरिने गर्छन् । रजस्वला भनेको कुनै पाप होइन् । रजस्वला भनेको त शरीरमा भएको फोहोर रगत बाहिर जानु हो या यस कारण पनि बुझन्न सकिन्छ कि एउटा युवतीमा हुने शारीरीक विकाश हो । आखिर किन रजस्वलालाई फरक दृष्टि कोणले हेर्छ त हाम्रो समाजले ? म आफै पनि भोगेका र देखेका कुराहरु लेख्न गइरहेकी छु ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि मानिसको मष्तीस्कमा रजस्वलाको बारेमा नकरात्मक सोच रहेको छ । रजस्वला भएको युवतीलाई घृणाको दृष्टिले हेरिने गरिन्छ । समाजमा रजस्वला भन्दैमा त्यो त नछुइने भएकिछे भन्ने गरिन्छ । रजस्वलाको बारेमा अझै पनि कति पय ठाँउमा त युवतीहरुलाई थाहा पनि छैन होला रजस्वला भन्नाले महिना महिनामा हुने कुरा हो । यस्तो बेला उनलाई धेरै सुरक्षीत गर्नुपर्छ । रजस्वला भन्दैमा नराम्रो सोच राख्नु हुन्दैन किनभने रजस्वला पछि युवतीमा परिपक्कता छाउछ । आमा बन्न योग्य हुन्छिन । महिनावारीको समयमा पोषिलो खाना दिनु पर्दछ जस्ले गर्दा उनलाई कमजोरी महसुस हुदैन । सफा ठाँउमा बसाल्ने । तातो लुगा लगाउन दिने गर्नुपर्दछ । महिनावारीको समयमा महिलालाई धेरै पिडा हुने गर्छ । म पनि एउटा युवती हो । मैले पनि कतिपय कुराहरु भोगन परेको हुनाले हजुरहरुले यहि कुराहरु भोग्न नपरोस भनेर केही शब्दहरु लेख्न गइराछु । पहिलो पटक रजस्वला हुदा कतिपय युवतीहरु डराउने गर्छन किनभने उनलाई यस बारे केहि शिक्षा पाएका हुदैनन् ।
ग्रामीण भुभागमा महिलालाई गरिने व्यवहार हामीले समाचारमा पनि सुनेकै छौं । रजस्वला युवतीलाई घर भित्र आउन दिनु हुन्न, छुन दिनु हुन्न, भन्ने यो गर्ने हुदैन भन्ने घरबाट टाढा बस्नु पर्ने वाध्यता अझै पनि कुनै ठाँउ ( जस्तै सुर्खेत ) पहाडी मुलुका कतिपय ठाँउमा छाउपडी प्रथा जस्तो अन्धविशवासलाई धेरै मान्यता दिने कतिपए ठाँएमा रहेको छ ।
यस्तो कुप्रथाले गर्दा कतिपय युवतीहरुले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउन समेत वाध्य भएका छन् । कतिपय अवस्था र ठाँउमा त प्राय.नारीहरु योन शोषण र सारिरिक शोषणबाट पिडीत समेत भएको खबर हामीले दिन दिनै सुन्न र देख्न सकिन्छ । वास्तवमा आम नेपाली नारीको यो पिडा आखीर सरकारले कहिले सम्म बुझ्न सक्छ त ?
गाँउमा एउटा नारी युवतीलाई रजस्वला हुदा कति पिडा हुन्छ त्यो त केवल नारीले मात्रै बुझ्ने गर्छ । अझै पनि ग्रामीण भु.भागमा महिनावारी हुदा सर्वप्रथम आफु र आफ्नो व्यतीगत सरसफइमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान समेत नरहेको पाइन्छ । रजस्वला भएको बेला युवतीलाई स्यनटेरी प्याडको धेरै नै आबसेक हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्यनटेरी प्याड निशुल्क वितरण गर्नैपर्छ । त्यसैले समाज परिवर्तन गर्नको लागी सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो घर बाटै सकरात्मक कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ ।